Ashaya amakhala ngokhetho amakhosi | Isolezwe
Ashaya amakhala ngokhetho amakhosi
Isolezwe / 27 July 2012, 1:44pm /
INKOSI uMpiyezintombi Mzimela okhala ngokugxambukela kosombusazwe okhethweni lwamakhosi obelungesonto eledlule e-ICC eThekwini
UBUHOLI obusha beNdlu yoMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi uPhathisizwe Chiliza ongusihlalo omusha nephini lakhe iNkosi uVictor Ngcobo abakhethwe ngaphandle kokuphikiswa
AMAKHOSI angagculisekile ngokhetho lweNdlu yobuHoli boMdabu KwaZulu-Natal akhononda ngokugxambukela kosopolitiki nokuholele ekutheni izinto zingahambi ngendlela futhi nabesifazane basale ngaphandle kwafakwa inqwaba yabesilisa kuphela ezikhundleni.
Lokhu kuvele ngemuva kokuthi iNdlu yobuHoli boMdabu ibe nokhetho lwesifundazwe lapho kukhethwe khona iNkosi yaseMadungeni iNkosi Phathisizwe Chiliza ngaphandle kokuphikiswa njengosihlalo omusha.
Enye yamakhosi angeneme iNkosi uMpiyezintombi Mzimela obeyiphini likasihlalo walesi sakhiwo somdabu uthe yize bengenankinga ngokuqokwa kobuholi obusha kodwa kubaphathe kabi ukugxambukela kosombusazwe.
“Okusiphathe kabi wukuthi kunosopolitiki be-ANC abangene bagamanxa ezindabeni zalolu khetho kangangokuthi kunamakhosi abizelwe emihlanganweni eyinguyazana eThekwini ehhotela iMarine Parade nasemahhovisi kaKhongolose ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuba kufike ukhetho kuqinisekiswa imizamo yokuthi kumele amakhosi avotele bani futhi kufanele avote kanjani. Lokhu kusiphathe kabi ngoba kuthe uma kufikwa okhethweni thina ebesingazi sabona abantu bephethe amapheshana abizwa ngokuthi wuchatho abenamagama abantu obekufanele bavotelwe ekubeni thina besingazi,” kusho uMzimela
Uthe lesi simo siholele ekutheni amakhosi esifazane azithole esesele ngaphandle njengoba isigungu esiphezulu sikhiphe bonke abebesesigungwini esidala kwafakwa abantu besilisa kuphela.
Echaza uthe isimo bese bezama ukusilungisa ekutheni kukhuliswe isibalo sabantu besifazane kulesi sakhiwo somdabu begwema ukugxekwa nokuhlaselwa kwamakhosi abezogcina esolwa ngokuthi awahambisani nezinguquko futhi awafuni abantu besifazane bangene ezikhundleni ezibalulekile.
Uthe konke lokhu kuguqukile ngenxa yokugxambukela kosombusazwe njengoba kulolu khetho kufakwe amakhosi angabantu besilisa kuphela nokuyinto ebuyisela ubukhosi emuva.
“Okunye okusiphazamisile wukuthi njengoba lolu khetho luqale emazingeni ezifunda sibone sekujutshwe bonke abaholi be-ANC abehlukene ukuyoqapha ezikhungweni zokuvota into engakaze yenzeke ukuthi silethelwe osombusazwe uma sikhetha abaholi.
Ngaphandle kwalokho izinto zihambe ngendlela engagculisi ngoba kuthe ngoNovemba uNgqongqoshe omusha wezokuBusa noku-Bambisana uMnuz Richard Baloyi wakhipha umyalelo wokuthi sekumele isikhathi sethu sasehhovisi siguqulwe silinganiswe neseNdlu yoMdabu kazwelonke,” echaza.
Uthe ngemuva kwalokho uMnyango kaNgqongqoshe wezokubusa ngoku-Bambisana KwaZulu-Natal ophethwe nguNksz Nomusa Dube awuzange usaxhumana nabo kunalokho ube usuphuthumisa izinguquko kwaphulwa no-section 5 ka-2005 obulawula ubuholi boMdabu esifundazweni obuyalela ukuthi isikhathi sehhovisi siphele ngo-2014.
Okhulumela uMnyango kaNksz Dube uMnuz Vernon Mchunu uthe kuyinto ejwayelekile ukuthi umuntu uma ehluliwe akhononde kodwa bona basebenzisana kahle namakhosi .
Uthe akukho okubi ngokhetho ngoba amakhosi avote ngendlela abeyalelwe ngayo nafundiswe ngayo futhi akuzange kube khona ukugxambukela kwezombusazwe.